पार्टी एकता नगर्ने ओली र प्रचण्ड बीच गोप्य सहमति दोस्रो तहका नेतालाई समेत थाहा दिएनन::– Nepal's Digital Paper
१गोरेले लिए नेकपाकै उच्‍च तहका नेताहरुको नाम, आखिर यी रहेछन मुख्य तस्कर
२मदन भण्डारीको मृत्युका बारेमा सत्य तथ्य छानविन गर्न कांग्रेसको माग
३असफल इन्काउन्टर गर्ने प्रयास ‘गोरे’ को बयानले ठूला माछाको सातो गयो !
४सुन तस्करीमा को हुन् पर्दा पछाडिका नायक , गोरेले खोलिदिय सबैको पोल
५गोरेले लिए सुन तस्करीमा संलग्न अन्य व्यक्तिको नाम ! हेर्नुहोस अरु को को हुन् ?
६पक्राउ परे लगत्तै यस्तो भने गोरेले, गृह मन्त्रालय देखि विमानस्थल सम्म मच्चियो हंगामा
७पोर्न फिल्म हेर्दाहेर्दै यी युुवकले काटे आफ्नै यौनांग
८भाइरल ज्वरोको अनुगमन गर्न जाजरकोट पुगेका मन्त्रीको बिल १८ लाख !
९अब म प्रधानमन्त्री होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बन्छु : प्रचण्ड
१०नीति तथा कार्यक्रमबारे यस्तो छ बाबुराम र देउवाको प्रतिक्रिया
११मलेसियामा जाने कामदारको भिसा सोमबारदेखि बन्द
१२संविधान संशोधनमा गोप्य सहमति भएको प्रचण्डको खुलासा
१३दश वर्ष भित्रै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सम्मानित बनाइने
१४सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई स्वरोजगार लाई
१५मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिका जान रोके पछि यस्तो भने मुख्यमन्त्री राउतले
पार्टी एकता नगर्ने ओली र प्रचण्ड बीच गोप्य सहमति दोस्रो तहका नेतालाई समेत थाहा दिएनन
काठमाडौं – सङ्गठनात्मक समायोजन, जनयुद्ध र निर्वाचन चिन्ह ।यी तीनवटा विषयमा सहमति हुन बाँकी छ–एमाले–माओवादी पार्टी एकता घोषणाका लागि । यी तीनै विषयमा सहमति जुटाउनुपर्ने जिम्मेवारी एकता संयोजन समितिमा आइपुगेको छ । तर एकता संयोजन समितिको बैठक बस्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
यी तीनवटा प्राविधिक विषय त ढिलोचाँडो हल होलान् तर एमाले र माओवादी नेताबीच बढ्दो अविश्वास चाहिँ पार्टी एकतामा जटिलता बनेर आउन थालेको छ । मिलेका मनमा फेरि शङ्का देखिन थालेको छ ।
माओवादी नेताहरू सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको एकलौटी कार्यशैलीले प्रचण्डलाई शङ्का पैदा भएको उनीनिटक नेताहरू बताउँछन् । नेताहरूबीच अहिले मनोवैज्ञानिक युद्ध चलेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणसकेर फर्केपछि उनी र प्रचण्डबीच एक पटक भेट भयो, तर, लामो कुराकानी भएन । त्यसबाहेक केन्द्रीय समितिमा सम्मानजनक सहभागिता खोजिरहेको माओवादीले एमालले चुनावी सिटका आधारमा जानुपर्ने दबाब बनाएको छ ।
एमाले र माओवादीबीचको एकतामा पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली पनि माओवादी नेताहरूले जिम्मेवार ठान्न थालेका छन् । यद्यपि उनीहरू यस विषयमा चाहिँ औपचारिक रूपमा भने बोल्न मान्दैनन् ।
‘सरकार जसरी गठन भएको छ र भविष्यमा पार्टी एकता हुँदैछ । यसविपरीत प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार शक्तिसँग परामर्श नगरी काम गरिरहनु भएको छ ।’ माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘एकतामा प्रक्रियामा यसले पनि शङ्का पैदा गरेको छ । दुवै दलका शीर्ष नेता रहेको संयोजन समितिमा कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन र मिल्न बाँकी विषयगत ज्ञान पनि लगभग सबै नेतालाई थाहा छ ।
तर, ती विषय कसरी सल्ट्याउने भन्ने उपयुक्त सूत्र चाहिँ फेला परेको छैन । जसले एकता संयोजन समितिको बैठक आज–भोलि गर्दै सर्दै गएको छ । मङ्गलबारबाट बुधबार हुँदै एकता समितिको बैठक अब कहिले बस्ने हो रु अत्तोपत्तो छैन । तर, नेताहरूले तयारी नभएकाले बैठक बस्न नसकेको बताउँदै आएका छन् ।
यसअघि दुई पटक पहिला चुनावलगत्तै र दोस्रोमा प्रधानमन्त्रीको भारतभ्रमण अगाडि एकता गर्ने उनीहरूको कार्यसूची सफल भएन ।
त्यसपछि उनीहरूले दुई पार्टीबीच वैशाख ९ गते पार्टी एकता गर्ने तयारी थालेका हुन् । चैत २२ गते बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकमा कार्यदलले वैशाख ९ गते नै एकता घोषणा गर्न सुझाव दिएको थियो । जसमा शीर्ष नेता सहमत भएका थिए । वैशाख ९ गते कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवस भएकाले पनि यो दिन रोजेको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
चैत २२ को बैठकले वैशाख ९ गते हुने घोषणासभा भव्य पार्न दुवै दलले आ–आफ्ना कार्यकर्तालाई सुर्कुलर नै जारी गरिसकेका छन् ।
तर अड्किएको चुरो कुरो मिलाउन भने नेताहरूले खासै पहल गरेका छैनन् । अझ पछिल्ला दिनमा त्यसको गृहकार्य नै ठप्पजस्तै छ ।
चैत २२ गते बालुवाटारमा भएको एकता समितिको छलफल बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि दुवै ९अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड० नेताको सहमतिमा एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाउने सहमति थियो ।
त्यही सहमतिअनुसार ओली भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै अर्थात् चैत २६ गते ओली र प्रचण्डबीच टेलिफोनमा कुरा भयो– चैत २७ गते एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने ।
अध्यक्षद्वयको सल्लाहअनुसार एकता संयोजन समितिका अन्य सदस्यलाई मङ्गलबार बैठक बस्ने खबर गरियो । तर बैठक बस्ने खबर अएको ८ घण्टा नबित्दै शीर्ष नेताको समय अभावले मङ्गलबारको बैठक स्थगित गर्दै बुधबार ५ बजे बेलुका बस्ने खबर पुनः दिइयो ।
बुधबार दिउँसोसम्म बेलुका बैठक बस्नेमा सबै नेताहरू ढुक्क थिए । तर, बुधबार १ बजेतिर नै बैठक स्थगित भएको समाचार आयो । कारण थियो– माओवादी अध्यक्षको स्वास्थ्यमा आएको गडबडी ।
त्यसपछि बैठक कहिले बस्ने अनिश्चितजस्तै छ । बैठक बस्ने समय नतोकिएपछि एकता संयोजन समितिका ९अध्यक्षबाहेकका० नेताहरू बैठकबारे अनविज्ञ जस्तै छन् ।
माओवादीका नेता तथा राजनीतिक कार्यदलका सदस्य देवेन्द्र पौडेल भन्छन्– ‘तीनवटा विषयमा सहमति गर्ने तयारीपछि मात्रै एकता संयोजन समितिको बैठक बोलाउने मुड नेताहरूको हुनसक्छ । समय अझै बाँकी छ । त्यसकारण वैशाख ९ गते पार्टी एकता घोषणाको सम्भावना अझै कायमै छ ।’
नेता पौडेल दुई नेताबीच आन्तरिक संवाद भैरहेको दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘नेताहरूबीच अन्तरिक कुराकानी नै नभएको होइन, भइरहेको छ । बैठक राखेपछि केही न केहीमा सहमति गर्नुपर्ने भएकाले पनि बैठक बस्न समय लागेको हुन सक्छ ।’
प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमा शङ्का
प्रधानमन्त्रीले केही मन्त्रालयका महत्वपूर्ण विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेकोमा पनि माओवादी मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डको स्वास्थ्यलाई बहाना बनाइए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणको सम्मुखमा सचिवहरूको सरुवा गर्दा एकलौटी गरेकोमा माओवादी मन्त्री र नेताहरूलाई चित्त बुझेको थिएन ।
यसबारे माओवादी मन्त्रीहरूले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाइसकेका थिए । एकथरी नेताहरूले यही कारण पनि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच एकताबारे खुलेर छलफल हुन नसक्दा एकता समितिको बैठक बस्न ढिला भएको बताएका छन् ।
तर, माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्– ‘मलाई त त्यस्तो लाग्दैन जे गर्दा पनि उहाँहरूबीच सहमतिमै हुने गरेको हो ।’
सचिवको बदला आईजीपी
प्रधानमन्त्रीले सचिव सरुवा गर्दा एकलौटी गरेकोमा माओवादी असन्तुष्ट हुनु स्वभाविक हो । यही असन्तुष्टि कायमै रहेका बला सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
सशस्त्रको आईजीपीमा शैलेन्द्र खनाल निर्विविवाद थिए भने नेपाल प्रहरीको आईजीपी बन्न तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो ।
सर्वेन्द्र खनाल, पुस्कर कार्की र रमेश खरेलमध्ये पुस्कर कार्की एमाले कोटाबाट आईजी बन्न चाहान्थे । प्रधानमन्त्री ओलीको चाहाना पनि त्यही थियो । तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सर्वेन्द्र खनाललाई आईजीपी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगे ।
थापाको उक्त प्रस्तावमा मङ्गलबार बिहान बसेको क्याबिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सहमत भएनन् ।
जसले गर्दा मङ्गलबारै राति ८ बजेपछि दोस्रो पटक क्याबिनेट बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री थापाले गरेकै प्रस्तावअनुसार खनालाई आईजीपीमा नियुक्त गर्ने निर्णय सदर गरे ।
६ महिने गृहकार्य
असोज १७ पछि लगातार ६ महिना गृहकार्य गरेर पार्टी एकताको तयारी गरेका एमाले माओवादीबीच पार्टी एकताबारे कहिले धेरै चर्चा हुन्छ त कहिले सामसुम जस्तै हुन्छ ।
एकता प्रसङ्गमा नेताहरूको कहिले एकै मुख हुन्छन् त कहिले विपरीत । नेताको एकै मुख हुँदा एकता भैहाल्छ कि भनेर सोच्ने कार्यकर्ता विपरीत अभिव्यक्ति आउँदा ‘टर्यो कि रु’ भन्ने अनुमान लगाउँछन् ।
विगत ६ महिनाको अवधिमा दुई पार्टीले पार्टी एकताका लागि कार्यदल बनाएर राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानको मस्यौदा नै तयार गरिसकेका छन् । पार्टी एकता गर्नेमा दुवै पक्ष सैद्धान्तिक रूपमा तयार पनि देखिन्छन् ।
तर केही प्राविधिक कुरामा सहमति भइनसकेको अवस्थामा सरकारका संरचना र संयन्त्र परिवर्तनमा देखिएको असमझदारीले के एमाले माओवादी एकता प्रकृया नै डिरेल हुने त हैन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ ।
तर, एमाले नेता सुवास नेम्वाङ सहमति जुटाउन केही ढिला भए पनि वैशाख ९ को डेडलाइनमै पार्टी एकता घोषणा हुने दाबी गर्छन् ।
नेम्वाङ भन्छन्, ‘यो बीचमा दुई पार्टीबीच केही असमझदारी जस्तो देखियो तर वास्तविकता त्यस्तो होइन । सचिव सरुवा र आईजीपी नियुक्तिलाई कतिपयले मुद्दा बनाए पनि बाहिर आएका हल्लामा कुनै सत्यता छैन । मात्रै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अलि अस्वस्थ भएर समितिको बैठक बस्न नसकेको हो ।’
प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड काठमाडौं बाहिर
प्रधानमन्त्री केपी ओली आज रारा जाँदैछन् । भोलि त्यहाँबाट उनले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी प्रचण्ड पनि हिजोदेखि नै गृहजिल्ला चितवन छन् । त्यसैले अरू दुई–तीन दिन यी नेताबीच भेट हुनेछैन ।